ဇေဖနိ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / ဇေဖနိ
1:1 The word of the Lord that came to Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, အာမရိ၏သား, ဟေဇကိမင်း၏သား, in the days of Josiah the son of Amon, ယုဒရှင်ဘုရင်.
1:2 While gathering, I will gather together all things from the face of the earth, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
1:3 I will gather man and cattle; I will gather the flying things of the air and the fish of the sea. And the impious will beacatastrophe. And I will disperse men before the face of the earth, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
1:8 နှင့်ဤဖြစ်ရကြလိမ့်မည်: in the day of the victim of the Lord, I will visit upon the leaders, and upon the sons of the king, and upon all who have been clothed with strange garments.
1:10 ဤရွေ့ကား, ထိုကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ: the voice of an outcry from the fish gate, andahowling from the Second, andagreat contrition from the hills.
1:15 That day isaday of wrath,aday of tribulation and anguish,aday of calamity and misery, မှောင်မိုက်နှင့်မှောင်တဲ့နေ့က, တိမ်နှင့်လေဘွေရာနေ့,
2:1 စုဝေး, be gathered together, O people not worthy to be loved.
2:3 သခင်ဘုရားကိုရှာကြလော့, all you meek of the earth; you who have been working are his judgment. Seek the just, seek the meek. သို့ဖြစ်., in some way, you might be hidden in the day of the fury of the Lord.
2:9 ဒီအတွက်ကြောင့်, as I live, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်, Moab will be like Sodom, and the sons of Ammon like Gomorrah, like the dryness of thorns, and piles of salt, andadesert, all the way to eternity. The remnant of my people will despoil them, and the residue of my nation will possess them.
2:12 သော်ငြားလည်း, you Ethiopians, you will be executed by my sword.
3:1 ထို provocatrix နှင့်ရွေးနှုတ်တော်မူသောမွို့မှမင်္ဂလာရှိ၏, အဘယ်မှာရှိသနည်း.
3:2 သူမသည်စကားကိုနား ထောင်. မထား, မဟုတ်သလိုသူမစည်းကမ်းလက်ခံခဲ့သည်. သူမသည်သခင်ဘုရား၌ယုံကြည်စိတ်ချရသေးပါဘူး; သူမကသူမ၏ဘုရားသခင့သို့မချဉ်းကပ်.
3:5 The just Lord is in their midst; he will not do iniquity. မနက်ခင်းမှာ, မနက်ခင်းမှာ, he will bring his judgment into the light, and it will not be hidden. But the impious one has not known shame.
3:7 ငါကလည်း: သို့သော်ငြားလည်း, you will fear me; you will accept discipline. And her dwelling place will not perish, despite all the things about which I have visited her. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, they arose with the dawn and corrupted all their thoughts.
3:8 ဒီအတွက်ကြောင့်, expect me, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, in the day of my resurrection in the future, for my judgment is to gather together the Gentiles, and to collect the kingdoms, and to pour out over them my indignation, all the fury of my anger. For by the fire of my zeal, all the earth will be devoured.
3:9 ထို့နောက်အဘို့ငါကလူတစ်ဦးကိုရှေးခယျြနှုတ်ခမ်းပြန်ပေးမည်, လူအပေါင်းတို့သည်သခင်ဘုရား၏နာမတော်ကိုမြွက်နိုင်ပါသည်နှင့်တစ်ပခုံးနှင့်သူ့ကိုဝတ်ပြုစေခြင်းငှါဤမျှ.
3:10 အီသီယိုးပီးမြစ်တို့တဘက်ထဲကနေ, အကြှနျုပျဆုတောငျး, ငါ၏အရှိမှာဖြစ်ပြီး၏သားတို့သည်, ငါ့ထံသို့လက်ဆောင်တစ်ခုသယ်လိမ့်မည်.
3:11 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, သင်သည်သင်၏တီထွင်မှုလုံးရှက်မည်မဟုတ်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုပြစ်မှားကြပြီသော. ထို့နောက်အဘို့သင့်အလယ်၌ငါမှသင်၏မာနထောင်လွှားမိစ္ဆာဆရာတို့ပယ်ရှင်းမည်, သင်တို့သည်နောက်တဖန်ငါ၏သန့်ရှင်းသောတောင်တပြင်ပေါ်ချီးမြှောက်မည်.
3:12 ငါသည်လည်းသင်တို့၏အလယ်သို့တစ်ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောလူဦး bequeath လိမ့်မည်, ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရား၏နာမ၌မျှော်လင့်ပါတယ်လိမ့်မည်.
3:13 ဣသရေလအမျိုး၏အကြွင်းအကျန်ကိုမတရားသောအမှုကိုမည်မဟုတ်, မဟုတ်သလိုမုသာစကားကိုပြော, တစ်လှည့်ဖြားသောလျှာသည်မိမိတို့နှုတ်၌တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. သူတို့ကျက်စားလိမ့်မည်လျောင်းကြလိမ့်မည်များအတွက်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောသူတို့နှင့်အတူဒဏ်ခတ်ဖို့အဘယ်သူမျှမဖွစျလိမျ့မညျ.
3:14 ချီးမွမ်းခြင်းကို Give, ဇိအုန်သတို့သမီး. ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြွေးကြော်, ဣသရ. ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့နှင့်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ, ယေရုရှလင်သတို့သမီး.
3:15 ထာဝရဘုရားသည်သင်၏အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုပယ်တော်မူပြီ; သူသည်သင်၏ရန်သူများလမ်းလွှဲထားပါတယ်. ဣသရေလအမျိုး၏ရှင်ဘုရင်, ဘုရားသခင်, သင့်အလယ်၌ရှိ; သင်တို့သည်နောက်တဖန်ဘေးဥပဒ်ကိုကွောကျရှံ့ရကြလိမ့်မည်.
3:16 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, ယေရုရှလင်မြို့ပြောကြလိမ့်မည်, "မကြောက်ပါနဲ့,"နှင့်ဇိအုန်မြို့အား, "သင်၏လက်ကိုအားလျော့စေခြင်းကိုခံကြစေမထားပါနဲ့။ "
3:17 သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင့်အလယ်၌အစွမ်းသတ္တိဖြစ်ပါတယ်; ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်. သူဟာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သင်တို့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်. သူ့မေတ္တာအတွက်, သူတိတ်ဆိတ်စွာနေဖြစ်လိမ့်မည်. သူကဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနှင့်တကွသင်၌ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်.
3:18 ပညတ်တရား၏လက်မှနုတ်ထွက်ရသူ triflers, ငါသည်စုဝေးစုဝေးစေမည်, သူတို့သည်သင့်ထံမှခဲ့ကြသောကြောင့်,, သင်တို့သည်နောက်တဖန်သူတို့ကိုကျော်အရှက်တကွဲအကျိုးကိုခံရစေခြင်းငှါဤမျှ.
3:19 အကယ်, I will execute all who have afflicted you in that time, and I will save those who are lame, and I will gather together her who had been cast out. And I will place them in praise and in renown, in all the land where they had been put to shame,
3:20 အဲ့အချိန်မှာ, when I will lead to you, and in the time when I will gather for you. For I will deliver you into renown and into praise, among all the peoples of the earth, when I will have converted your captivity before your very eyes, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.